को fairer सेक्स को मुख्य प्राकृतिक समारोह - प्रजनन। किन ढिलो होस् वा पछि, हरेक महिला एक मातृ अन्त र सन्तान गर्न इच्छा छ भन्ने छ। यो योजना pregnancies अधिकांश सफलतापूर्वक समाप्त कि टिप्पण लायक छ। तर, 100 महिला लगभग 20 "सम्झना गर्भपतन" वा एक निदान सामना "स्वभाविक गर्भपतन।" यस लेखले एक गर्भपात पछि गर्भवती प्राप्त गर्न सक्छन् कति तपाईं भन्नेछु। तपाईं विषयमा विशेषज्ञहरु को राय जान्न र आफूलाई महिला को इतिहास संग familiarize गर्न सक्षम हुनेछ। यो पनि बाहिर फेला धेरै दिन कसरी लायक छ एक गर्भपात पछि सुरक्षा बिना सेक्स भइरहेको यदि गर्भवती प्राप्त गर्न सक्छन्।
एक स्वभाविक गर्भपतन के हो?
तपाईं एक गर्भपात पछि गर्भवती प्राप्त गर्न जब थाहा अघि, यो प्रक्रियाको बारेमा केही शब्द भन्दै लायक छ। स्वभाविक गर्भपतन वा प्राकृतिक गर्भपतन - यो यसको झिल्ली अस्वीकार पछि भ्रूण को जीवन को समाप्ति छ। अक्सर, यो प्रक्रिया धेरै प्रारम्भिक चरणमा मा हुन्छ। धेरै महिलाहरु पनि आफ्नो नयाँ रोचक स्थिति सिक्न समय छैन।
गर्भपात पूर्ण वा आंशिक हुन सक्छ। पहिलो मामला मा पूर्ण ovum सम्पूर्ण खोल, सँगै अर्जित endometrium संग जान्छ। एकै समयमा अर्को महिनावारी अघिल्लो व्यक्तिहरूलाई भन्दा केहि बढी प्रशस्त हुन सक्छ। उर्वर शरीर गुहा मा आंशिक गर्भपात केही भ्रूण झिल्ली रहनेछ। तिनीहरूले surgically हटाउन आवश्यक छ। सबै भन्दा अधिक प्रयोग curettage वा निर्वात आकांक्षा।
तपाईं एक गर्भपात पछि गर्भवती प्राप्त कति गर्न सक्छौं?
अब सम्म, विशेषज्ञहरु यस मुद्दा मा एक सहमतिका पुग्न सकेका छन्। केही gynecologists अवधारणा ठाउँ लिन पर्छ कम्तिमा छ महिना तर्क। अरूलाई obstetricians योजना कम्तिमा 18 महिना साथ प्रतीक्षा गर्न सल्लाह। डाक्टर को एक समूह पनि छ, मल संग हतार गर्न महिला सल्लाह दिएको छ। कसले सुन्ने लायक छ? कसरी यो अवस्था मा fairer सेक्स हुन? कति महिना पछि यो एक गर्भपात पछि गर्भवती प्राप्त गर्न सम्भव छ? यस सन्दर्भमा अझ विस्तृत बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्।
छ महिना पछि गोदभराई
तपाईं एक गर्भपात पछि गर्भवती प्राप्त कति गर्न सक्छौं? सबैभन्दा चिकित्सकहरु छ महिना मा सीमाना स्थापना। यो यस अवधिमा थियो हर्मोन को fairer सेक्स फिर्ता बाउन्स गर्न सक्षम छ, यो भयो कि सबै देखि ठीक गर्न सक्षम हुनेछ।
साथै, डाक्टर कारण यो अवधि अनुमति दिन्छ विफलता को कारण पत्ता लगाउन एक महिला छ भन्ने तथ्यलाई गर्न छ महिना को अन्तराल बारेमा भन्छन्। यस रोग प्रक्रियाको एक पुनरावृत्ति रोक्न मद्दत गर्न पछि सुधार। एकदम अक्सर एउटा असफल गर्भावस्था पछि gynecologists मौखिक निरोधकों को दबाइ समूह लिएर fairer सेक्स पाठ्यक्रम सल्लाह दिन्छन्। यी दबाइहरु menstrual समारोह बहाल गर्न र अस्थायी रूपमा ovaries रोक्न मद्दत। यी को स्वागत बेला गर्भावस्था सक्दैन मतलब टिप्पण लायक छ। तर, अवधारणा को उन्मूलनको पछि पहिलो केही चक्र हुन्छ।
एक वर्ष भन्दा बढी गर्भावस्था
तपाईं एक गर्भपात पछि गर्भवती प्राप्त कति गर्न सक्छौं? प्रजनन केही 12 महिना को एक समय अन्तराल मा जिद्दी। यो अवधि सबै पत्ता विकृति समाप्त र महिला स्वास्थ्य बहाल छ।
प्रायजसो, एउटा असफल गर्भावस्था परीक्षा नियुक्त भएपछि। यो संक्रमण र हर्मोन लागि मानक परीक्षण समावेश छ। साथै, expectant आमा hysteroscopy, laparoscopy वा metrosalpingography रूपमा यस्तो निदान पारित गर्न सिफारिस गरिएको छ। यी अध्ययन एनेस्थेसिया प्रयोग आवश्यक छ। हेरफेर महिनामा ग्रीवा नहर को विस्तार उत्पादन र एक विशेष उपकरण प्रयोग गरेर प्रजनन अंग गुहा जांच। यस्तो manipulations पछि केही महिनाको लागि अवधारणा योजना सिफारिस गर्दैनन्। अन्यथा त्यहाँ कमजोरीको वशमा पऱ्यौं को एक उच्च जोखिम पहिले नै अप्रिय स्थिति देखा परेको छ छ। बारेमा डेढ वर्ष, सबै अनुसन्धान मार्फत जाने निष्कर्ष प्राप्त र सुधार लागू एक महिला चाहिन्छ।
आधुनिक चिकित्सा अनुसार
तपाईं एक गर्भपात पछि गर्भवती प्राप्त कहिलेसम्म सक्छ? डाक्टर को अघिल्लो पुस्ता को सबै सीमितता तापनि जवान डाक्टर यो मुद्दा मा अलि फरक दृश्य छ। सबैभन्दा विशेषज्ञहरु अर्को अवधारणा सकेसम्म उत्पन्न गर्नुपर्छ भन्छन्।
अध्ययन एक3महिना को एक गर्भपात पछि औसत पछि गर्भवती भइन् महिला, भालु र एक बच्चा सहन जारी गर्न थप मौका छ भन्ने। विशेष गरी जो छ महिना लागि प्रतीक्षा भएको fairer सेक्स, अर्को अवधारणा भन्दा कडा परिश्रम थियो। तिनीहरूले गर्भावस्था बित्तिकै 7-10 महिना रूपमा छ। महिला जो कारण, थियो, जसले, एक वा बढी वर्षको लागि अर्को गर्भावस्था, अस्थानिक Gestational SAC को जोखिम बढेको स्थगित र बच्चा असामान्यताहरु संग जन्मिएको छ संलग्न गर्न।
कति तपाईं गर्भवती एक गर्भपात पछि फेरि, तपाईं आफूलाई सुरक्षित छैन भने प्राप्त गर्न सक्छन्?
धेरै महिलाहरु अवधारणा एक गर्भपात पछि चाँडै देखापर्ने छैन भन्ने विश्वास गर्छन्। तिनीहरूले सुरक्षा बिना सेक्स भइरहेको र तिनीहरूले सुरक्षित छ भनेर विश्वस्त छौं। तर, यो पूर्ण गलत धारणा छ।
तपाईं आफैलाई ovum को remnants मुक्त एक गर्भपात र uterine गुहा थियो भने, अर्को अवधारणा नै चक्र पहिले नै उत्पन्न हुन सक्छ। सबै कारण जीव को प्रारम्भिक चरणमा अहिलेसम्म गर्भावस्था मोडमा regroup समय छ भन्ने तथ्यलाई गर्न। हर्मोनल महिलाहरु नाटकीय परिवर्तन भइरहेको छ। एक अन्डा को follicle र जारी को प्रकटीकरण एक गर्भपात पछि केही दिन वा हप्ता भित्र उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। यो आफ्नो स्वास्थ्य गर्न यस्तै लापरवाही मनोवृत्ति स्थिति को एक पुनरावृत्ति गर्न सक्छ भनेर सम्झे गरिनेछ। कि गर्भपात एक डाक्टर देख्न र तपाईं फेरि गर्भवती प्राप्त गर्न सक्छन् जब एक गर्भपात लागि, कारण पत्ता लगाउन आवश्यक छ किन पछि हो।
समस्या को मनोवैज्ञानिक पक्ष
तपाईं एक पछि गर्भवती प्राप्त गर्न सक्छन् कति गर्भपात, तपाईं पहिले नै थाहा छ। तथापि, सबै योजना रूपमा बाहिर जान्छ। गर्भपात पछि लामो बाँझोपन लागि कारण मनोवैज्ञानिक पक्षमा झूठ हुन सक्छ।
को fairer सेक्स को धेरै स्वेच्छाले अर्को अवधारणा परित्याग। तिनीहरूले अवस्था एक पुनरावृत्ति को बस डराउँछन्। एक expectant आमा यस्तो हानि बच्न लागि यो धेरै कठिन छ। तर, अर्को चक्र मा अर्को योजना लागि तयार छन् जो केही महिला छन्। तथापि, तिनीहरूले पनि मनोवैज्ञानिक अवस्थाको प्रभाव अन्तर्गत हुनुहुन्छ, तर यो महसुस गर्छन्। योजना संग obsession पनि गर्भावस्था को एक लामो समयसम्म अभाव नेतृत्व गर्न सक्छ। तर, यो ध्यान भङ्ग र बित्तिकै मल हुन्छ आराम गर्न महिला छ। एक गर्भपात लामो अवधि (दोस्रो trimester) को लागि देखा परेको छ भने, त्यसपछि अर्को योजना अघि भविष्यमा आमा मनोवैज्ञानिक परामर्श प्राप्त गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो सबैभन्दा भावनात्मक पृष्ठभूमि स्थापना गर्न र सही बच्चालाई जन्म नै समायोजन गर्न मद्दत गर्नेछ।
लेखको परिणाम संक्षेप
तपाईं सजग कति सफलतापूर्वक गर्भपात पछि बच्चा गर्भ धारण गर्न सक्छन् हुन्छन्। यो रोग अन्ततः महिला 40 प्रतिशत सामना संग, भन्न अनावश्यक। तिनीहरूलाई केही पनि तिनीहरूले गर्भवती थिए थाहा छैन। स्थिति अवस्थामा मात्र 8-10 प्रतिशत दोहोर्याइएको छ। त्यहाँ पहिले नै बानी गर्भपात को एउटा प्रश्न हुन सक्छ। तपाईं यस्तो निदान सामना गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो आवश्यक छैन सकेसम्म अर्को अवधारणा योजना सुरु गर्न छ। पहिले तपाईं आफ्नो विफलता को कारण पत्ता लगाउन आवश्यक छ। यो एक पुनरावृत्ति raunchy क्षण विरुद्ध बीमा गर्न मद्दत गर्नेछ। तपाईं एक सफल गर्भावस्था र सजिलो योजना!
के तपाईं अस्पताल तपाईं संग लिनु आवश्यक?
हार्टबिट, गर्भावस्था को समयमा छिटो धडकन धेरै कारक निर्भर
कुनै ovulation। के गर्ने?
"भीएफएस": प्रयोगको लागि निर्देशन। Analogs, समीक्षा र contraindications "भीएफएस"
तल्ला मक्खन: खपत को प्रकार। काठ फर्श लागि कोटिंग
Asus K56CB: निर्दिष्टीकरण र डिजाइन
भोज - एक चाड खाने पार्टी वा खाने। banquets